Properties for Sale in Dagon Myothit (North) - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Dagon Myothit (North)
၃၁ရပ္ကြက္ေျမာက္ဒဂံု မွာ Classic Designျဖင့္ ...
#AungSan #ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ့နယ္ ၃၁ ရပ္ကြက္ မြာ မိန္းလမ္းမႀကီးမ်ားအနီးတြင္ ...
Ad Number S-10176908
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက်...
မြောက်ဒဂုံ ၊ ( ၃၅ )ရပ်ကွက် 3.5 RC ကို သိန်း၅၉၀၀ ထဲနဲ့ရမှာနော် မြေအကျ...
5,900 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10176793
**မြောက်ဒဂုံ 38ရပ်ကွက် မန္တလေးလမ်းမကြီး မြေ( 40x60) 2BN. ဂရံအလွန်စျေးတန်အရောင်းလေး
**မြောက်ဒဂုံ မန္တလေး လမ်းမကြီးပေါ်တွင် အိမ်ဆောက်နေထိုင...
Ad Number S-10174087
Ad Number S-10174059
Ad Number S-10173778
**မြောက်ဒဂုံ No 1. VIP 34ရပ်ကွက်လမ်းကျယ်ပေ...
Ad Number S-10173734
မြောက်ဒဂုံ ၊ ၄၆ရပ်ကွက် နှစ်ထပ်တို...
Ad Number S-10171056
5,850 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact OK Realestate Service
09766267958, 09799906001, 09674200521, 09894027849
Ad Number S-10182002
OK Realestate Service Close
မြောက်ဒဂုံ #ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမကြီးရှိ သံဇကာခြံစည်းရိုးခတ်ပြီး (ပါမစ်မြေ ၆၈ ပေ x ၈၁ ပေ)...
Ad Number S-10181806
မြောက်ဒဂုံ၊ (29)ရပ်ကွက် (45 x 60) မြေ(ဂရန်) (မြေပို ၅ ပေပါ) ရောင်းမည်။
Ad Number S-10181467
မြောက်ဒဂုံ ၊ (50)ရပ်ကွက် (20 x 60) 1BN လုံးချင်း အရောင်း
Ad Number S-10181435
မြောက်ဒဂုံ ၊ (35)ရပ်ကွက် (40 x 60) 1RC လုံးချင်း ရောင်းမည်။
Ad Number S-10181415
မြောက်ဒဂုံ ၊ (46)ရပ်ကွက် (20 x 60) 2SS အရောင်း
Ad Number S-10181397
မြောက်ဒဂုံ ၊ (42)ရပ်ကွက် (20 x 60) 3RC ရောင်းမည်။
2,650 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10181364
မြောက်ဒဂုံ ၊ (49)ရပ်ကွက် (23 x 60) 2RC လုံးချင်း အရောင်း
Ad Number S-10181343
မြောက်ဒဂုံ ၊ (50)ရပ်ကွက် (20 x 60) 2BN လုံးချင်း အရောင်း
Ad Number S-10181286
မြောက်ဒဂုံ၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ (70/80 x 82/87) 2RC လုံးချင်း အရောင်း
Ad Number S-10181227